Fence gate - bestpvcfence.com
musha >Products >Fence gate
Gedhi reFence richaita kuti munhu asvike munzvimbo yakakomberedzwa. Mukova wechipfighi unowanzoshandiswa sechinhu chinogona kushandurwa chinogona kuzarurirwa uye chakavharwa nemaoko kana ne simba redstone. Tose tinosarudza nezvekusarudzwa uye kusanganiswa kana zvichisanganisira fence neHART hardware. Takapfeka nyika nokuda kweFiristiki Yenyika Mukurusa Dzepasi Pose uye Gedhi reSango reSwing uye Slide Gates - vanofamba nemasuo emigwagwa!
Pfeka gedhi rako idzva kana rekupedzisira ne nyore-ku-install screw-on, bolt-on, kana weld-on Hinges. Raira tsime-kubatsira kana hydraulic Kuvhara Mazino Okuvhara madziva, kuchengeteka, uye kuchengetedzwa kwemapurogiramu.
Sarudza mufananidzo unofananidzwa, kana unopesana pamwe nefense yako NEYEREKE. Dema, chena, ndarira, mabati, zinc, kana mhangura zvinongopedzisira zvapiwa. Chengetedza kupinda kwako mune zvekare kare kana kuti kusvika kune unoziva kuziva kuenda neimba yako.
Kunyange zvakadaro pane fence pamusoro pekubatana kwakakodzera kwehawani, latches, uye accessories? isu takagadzirira Gedhi Re Hardware, Gate Kits, uye rakakwana rakachengetedzwa nemagetsi weSango Operator Kits rakaratidzwa kuti rinowanikwa pamwe chete.
pvc gedhi reimba yemumba
PVC inosungira suo rimwe chete re garden / pvc gate valve / pvc mashizha vashambadziri
PVC fence 3 ft single gate / pvc garden fence swing gate
masuo masikati masango pamapurazi / pvc fence suo hinges / pvc fence gate for lori
pvc driveway gate panorama
sango rekuvhara nekuvhara suwo / pvc ring masuo
pvc fence gate hardware / stainless latch / lock / hinge
pvc kuchengeteka masuo evana Fence gate
Vinyl Gate Fence
Kuenzanisa masuo kunosvika kune vose fence zvatinopa. isu tine masuo akaenzana kune imwe nzvimbo yekugara yefence yakagadzirwa, mafashoni fence mazano pa-line, pamwe nemasango nemabhiza masuo emasvingo. Masuo edu emasuo masuo akazara anogamuchira zvose kuita sesu rinogona kurarama hupenyu hwose! Masuo edu ose ari masuo akaputika, asi kana iwe uchida gedhi redu tichavaka! isu tine chido chekutadza kutakura masuo ega, asi vinyl yedu ingangodaro yakagadzirirwa kune dzakawanda zvese zvinotenderera.
Basa redu rakakomba vinyl masuo rinogamuchira soro rakasese hardware rinowanikwa. Iyo hardware isimbi isina tsvina-yakasvibirira yakafukidzwa yakasviba uye inouya ne nguva warrantee. Kwete zvakawanda zvekumhanyisa! Sekushamwaridzana muHanzvadzi yekuvandudza isu tine chido chekubatana pamwe chete kutakura mashizha emapurvinyl mavara ayo "anogadzirisa-siyana" kuitira kugadziriswa kwemavara uye kwakakwana uye kugadzirisa kugadzirisa kwekuzvivhara. Nzira dzedu dzinogara dzisati dzisati dzasvibiswa kuti dzienzane nesimbi dzedu dzisina ruvara. Kana iwe uine dziva, simbisa mapeji edu akatsiridzirwa ayo anokosha uye anogona kubvumirwa neBOCA! Kana dziva rako richida Magna Latch kana kuvhara, isu tine izvozvo zvinopfurikidza zvakare.
Kana iwe uchida ushu hwemukati wesuwo rako iwe uchakwanisa kuderedza zviyero panzvimbo yepaiti! isu tine chido chekuda kushamwaridzana mu Nursing kushandiswa kwesimbi metal element post inoshandiswa kune hinge post ye gate yako. Ichi chinhu chesimbi chinosungirirwa chakanyatsogadzirirwa uye chakavakwa kuti chibvumira chinyorwa chevinyl kuti titsigire suwo uye pasina droopy. Izvi zvinotsigira kutsigira hinge kunyorera nzira yakangobva kuizadza nekrete uye zvakare.
Chipando cheSuo Hardware
Kuti uise gedhi rezhenje, shandisa nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo asi ugozivisa panzvimbo inotarisana nenharaunda gedhi refence rinofanira kutora. paakaiswa, gedhi refence rinogona kutarisana nemutambi wenyika World Health Organisation akaisa iyo, pasinei nezvimwe zvipfigiro zvakapoteredza.
Gedhi recheni richaiswa kana kana kwete pane rakasimba mubato rezasi kana kuti kwete.
Masvingo, masvingo ematare uye masvingo ematombo anogona kubatana nemasuo eganda, zvisinei zvikaita girasi nematare esimbi hazvingaiti. Kana akaiswa uye asingabatanidzi kune chero chinhu, suo refence rinogona kuonekwa richikwira.
Gedhi rekuvhara richashandiswa sechisimba chinoshanduka.
Kuzarura kana kupfiga gedhi rezhenzi, shandisa iko kushandisa Itaji yekugadzirisa. kamwe kana suo revharo rinotanga kana rovhara, rinotarisa kuchinja maitiro aro asi kusingaendese chinhu mukati memunharaunda iyo "inopfuura" -kuisa fence masuo usamanikidze masangano nenzira iyo pistons dzinogona kuita. imwe yavhurwa noruoko, suo refence rinoramba richivhurwa rakabviswa kubva kumutambi.
Kunyange zvazvo gedhi rekuvhara rinoratidzika kunge rakangoita rimwe chete rerefu, gedhi rakapfigwa gedhi rinogona kuva chipingamupinyi chimwe uye 0.5 mavharo epamusoro-mapoka akawanda haagoni kuvhara gonhi refence, uye masangano ari pamusoro peyero rechenji rechina 0.5 chivharo chakakwirira kudarika .
Gedhi rakazaruka rakavharwa zvachose harisi rakasimba, pamwe chete nemasuo akazaruka. Multiple yakavhara fence masuo pedyo nezvose zvinoshandiswa zvichave zvichiitika sokunge nzvimbo yakakwana yakazaruka.
Hostile mobs vanobvumira akavhara masuo emasuo senhare uye havagone kuona vatambi kuburikidza nayo kunze kwekuti vatove vaonekwa.
Nzira Yokugadzira Gedhi reFence
1.Drive mushure mumiriri wegomba kusvika pasi, sarudzai zvigadziriswe, uye muise pamusana wevhu chero ripi zvaro rinounganidza. ita izvozvo kusvikira uine 2 masango ose maererano ne30 "yakadzika.
2.Kana zvinhu zvakasiyana-siyana zvezvidhinha kana dombo zvinosangana nazvo kuti nzvimbo yekuvhara gomba haigoni kuibvisa, kusangana nesimbi yekucheka ichaita kuti isunungure nyaya yacho.
3.Waka mukova uri pedyo nehupamhi hwakananga, kupera kwakasimba kwegomba zvinowanzojaira kuenzanisa ivhu riri mukati megomba kusvika pakupedzisira kwayo.
4.Shandisa huwandu hwekuita chokwadi kuti nzvimbo yacho inopinda mune imwe neimwe nzira.
5. Ita muvheti nemamwe masendimita evhu kuti atakure post post plumb. Shandisa purogiramu yakakosha yebumbire kuti iyananise ivhu.
6. Sakanidza krete mukati me pushcart nekubata zvishoma mvura. Iva nechokwadi chokuti mvura inoputika zvakaenzana munguva yose yekubatanidzwa, zvisinei musarega kusanganiswa kunonyorova.
7.Fill zvakapoteredza chinyorwa zvakaenzana nekrete kusvika krete iri 3 "pasi pegiredhi. mhando yehuni yakagadzirwa kazhinji inowanzogadziriswa nekiti uye inotora mhepo inoputika.
8.Wakaisa chikamu chechipiri, shandisa bhodhi uyewo muzinga kuti uone kuti imwe nzvimbo yepamusoro yepamusoro yakasiyana.
9.Zvino nzvimbo yacho inoputika, shandisa bhodhi rakaputika hupamhi bwegedhi rakapedzwa sepakati pekugara kure pakati pezvimwe zvikamu.
10.Predrill saka gadzirirai mabheti kune zvikamu zvemasuwo.
11.Predrill uye taurai mabheji kumapato mavhirwere mawere.
12.Attach kuchengetedza hardware uye udonhe tsvimbo pagedhi.
Nokuda kwechimiro chakaita seizvi, muchengeti wefence angagadzira gedhi rechimiro kuti rienderane negaka rako.
Jovyea inyanzvi yekugadzira Chinese (factory / wholesaler / suppliers) iyo ine hanya nekugadzira, kukura nekugadzirwa kwefence gate gate profiles.Our chain chain inozadza, yakanaka, yakanaka. Zvose zvemiti yedu inoteerera nehutano hwakanaka hwehutano hwemhando, zvigadzirwa zvedu zvave zviri vazhinji vevatengi pamwe chete vanobvumirana.